Parktronics izimoto: izinhlobo, izici, ukufakwa kanye nokubuyekeza
Ezimweni ezisemadolobheni yesimanje imoto kudinga ikhono eside - ezokuthutha siqu kuba nsuku zonke bayanda, futhi inkululeko ukuwuqondisa - kancane. Futhi uma namanje ukuphatha ukugibela abashayeli ke wafaka imoto zingene lot yokupaka, noma nje ayeke yi-esitolo - ke kuwumsebenzi eziyinkimbinkimbi edinga iso elihle futhi ijubane izinqumo. Vele ukuze kuxazululeke le nkinga futhi parktronics yakhelwe izimoto. Namuhla sizoxoxa ngokuningiliziwe.
Yokupaka izinzwa, noma yokupaka radar, isetshenziswa ukuze abatshele ukuthi umshayeli ukuthi imoto yakhe yadonsa sisondele kakhulu enye imoto noma isithiyo. Idivayisi ulula, kodwa ewusizo kakhulu ezimweni nge ukubonakala elinganiselwe ezindaweni eziminyene. Ngaphezu kwalokho, izimoto zanamuhla, ngenxa yokuthi cishe bonke of them - ne front-wheel drive, abe ngaphambili eziphephile eside futhi ezitshekile hood, okuyinto evame ayibonakali esihlalweni somshayeli. Ngaphezu kwalokho, ngenxa design uyakujabulela iwindi elingemuva wenza yayincane, ikakhulukazi saloon (lapho udebe ukuqalisa ayibonakali). Konke lokhu kudala kabi isidingo "ukulinganisa" ibanga into angaphandle "by iso". Ngezinye izikhathi awusebenzi ngaso sonke isikhathi uphela ngempumelelo. Ngenxa bumper imihuzuko zenzeka ngo sisondelene.
Kusebenza kanjani lokhu
parktronik ikhipha limelela ultrasonic radar izinzwa okuyizinto kokubili emitters. Bona ukukhiqiza amagagasi ultrasonic futhi wamukele ukucabanga nezenzo zabo. Ngesikhathi ukubuya idivayisi isignali kubonakala kuthola ibanga isithiyo. izimoto eziningi zanamuhla efektri ifakwe kule divayisi elula. Kodwa iyiphi izimoto ezindala, ungakwazi ukuyifaka. Umbuto ukutsi ukuthola yiziphi parktronics ngemoto.
Uhlelo siqukethe izinzwa eziningana, le usuke iyunithi kanye iphaneli ulwazi. I izinzwa kungenziwa esisogwini phambili (noma) ngesivuno ezingemuva - e esinzima kunazo, le likufuna izindawo, okuye kushiwo ngenhla. Izinzwa I-zone ngamunye kungaba ezimbili kuya. izingcezu ezimbili, okuyinto zitholakala lemahlanganweni - ukhetho ukonga kakhulu nengabizi. Kodwa maphakathi kumiswa endaweni abayizimpumputhe, okuyinto ingalawulwa. Kukhona ingozi yokushayeka e, anothi, ababambelela ongaphakeme aphume ipayipi phansi. Izinzwa ezintathu phezu bumper - yisisombululo eziqine kakhudlwana. Nokho, okuhle kakhulu ezine isici equidistant komunye nomunye. Ngakho, elawulwa ngokuphelele yonke indawo bumper. Ngokombono abanikazi isimiso esinjalo - ezivamile kanye nezimo zabo.
isihenqo Imininingwane Eqinisweni, kuyinto uhlelo isixwayiso umshayeli mayelana nokuba khona izithiyo. Ikhipha kuba ibhokisi elincane nge screen lapho imoto ngokomfanekiso ukuboniswa nezinzwa wahlela kwi amabhampa, kuncike ukumisa. Ngaphezu kwalokho izinhlamvu esikrinini, ingasetshenziswa okwengeziwe ibhiphu. Ngakho, kukhona izinhlobo ezintathu izaziso:
Uhlobo lokuqala - elula. Ephambi kwezinduna izithiyo ezonini ye-radar (kusuka 2.5 m kuya 25 cm) iqala isignali umsindo ngakanye. On esondela isithiyo (imoto noma) isignali uqala ukwandisa. Lapho eduze bumper umsindo iba okuqhubekayo. Ngosizo isimiso esinjalo esivumelana ukupaka ekulalelweni, kodwa uma nobunzima kokuzwa noma ukudlala umculo okhalela phezulu, izinzuzo PDC is kakhulu ziyancipha. Uhlelo olulandelayo - optical. Kuyinto isiqeshana LED anemibala ehlukene, kusukela eluhlaza ibe bomvu, ngokuvumelana budebuduze into. Lezi emapheshana ahlelwe ngakwesokudla washiya esikrinini ulwazi kanye nendawo zivumelana izithiyo ezinhlangothini abafanele wemoto. isibonisi Digital - isikrini lapho ziboniswa izinombolo - ibanga ngamamitha ukuba into. Izinombolo zivame kabili inkomba umsindo futhi emapheshana LED. Uhlelo uyakwazi ukuvula i-ongakhetha ahlukahlukene. Kwezinye izimo, isibonisi digital akudingekile kakhulu, noma, kunalokho, lapho ushayela emgwaqweni, kuyinto efiselekayo ukukhubaza izaziso ezwakalayo noma yokupaka izinzwa ngeke ngokuqhubekayo ibhiphu. Izibuyekezo abanikazi ibonisa ukuthi bonke izinhlelo ezintathu kukhona elula ngokulinganayo futhi ukhululekile ukusebenzisa ngokuvamile kuxhomeke ekutheni isipiliyoni somshayeli.
Izinhlobo parktronikov ezimotweni zahlukahlukene kakhulu, kodwa zihlukaniswe amaqembu ehlukene, okuyinto kufanele kushiwo:
Iqembu lokuqala liqukethe parktronics izimoto, okuyinto izinkomba kuhlanganisiwe ku esimenza abone into engemuva esibukweni strip Amabha kukhona odwi ovundlile anemibala ehlukene. Bayoba zikhanyise enye ngemva kwenye njengoba esondela izimoto ukuba siyini isithiyo.
Eyesibili, eziphambili nguqulo - izinzwa yokupaka, kuhlangene ikhamera Goal. Ebonisa Imininingwane imodeli esinjalo isibonisi digital, elibonisa isithombe ngekhamera elitholakala ngemva (futhi ngezinye izikhathi - phambi). Ngeshwa, kungenzeka lens ikhamera okunobuthi sezulu esibi, lapho ngeke kwenzeke ne izinzwa ezivamile - they cha besaba izinguquko sezulu.
Eziningi zanamuhla parktronikov onobuhle musa akhombe futhi iribhoni izinzwa. Lezi izinzwa okulula kakhulu ukufaka akemi out okuningi kwi-bumper, kangaka beba kwande.
parktronics Modern izimoto zivame anemisila imisebenzi eyengeziwe. Ngokuvamile benjalo Imininingwane eziphindaphindekayo futhi okungadingekile (iwashi, ikhampasi). Lapho ukhetha ezifanele imodeli PDC ukugxila kangcono kwi imodeli ngemisebenzi esiphezulu kanye kalula yokusetshenziswa.
Yini kufanele sinake
Ngaphambi ukhetha yokupaka izinzwa ngoba imoto, kufanele sinake ndawo, yena abazokhonza kuwo. Ngokuvamile amanani nangemuva zihlukile. Hlola futhi ukuthi izinga lokushisa kanye nomswakama nemibandela ukusebenza oluzayo. Sami izinzwa aboshelwe bumper emotweni, kumele abe nombala ofanayo, okungenani - nombala ofanayo, ukuze singathwesi ivelele kakhulu kusukela ukubukeka emotweni. isihenqo Imininingwane kufanele organically angena angaphakathi, ngokuvumelana nalo. Okungcono kakhulu, kubonakala sengathi i-esigcwele, ingxenye endaweni yokukhanda. Manje ezisendalini kukhona ezihlukahlukene onobuhle, futhi ukhethe ikhophi ezifanele kulula.
Okwamanje, ukufakwa yokupaka izinzwa yemoto - isevisi evame kakhulu ngesikhathi ogunyaziwe nezikhungo zomsebenzi. Ukusebenza akuyona yisixakaxaka futhi ikakhulu ezihlobene kudonswa izintambo kusukela izinzwa le usuke iyunithi nolwazi esibukweni. Nawo owabhalwa izimbobo imishini ukuze izinzwa bumper. Uma ufake yokupaka izinzwa ku imoto, intengo ngeke ifane kuye ukufakwa kit, kanye nohlobo kanye nosayizi yemoto. Le kit ungase uhlanganise kokubili into uqobo lwayo, futhi "fancy" uhlelo oyedwa noma ababili, amakhamera kanye TV. Ukufakwa yokupaka izinzwa izimoto e Moscow izobiza ruble 2500 kuya 4000 ukuze uthole inguqulo elula we izinzwa amane at the ezingemuva. Ukuze version ngekhamera kungadingeka akhokhe ruble ayizigidi 5-8.
Yiqiniso, ungagcina bese ufake yokupaka izinzwa phezu izimoto ngokwabo (zonke ngokuningiliziwe ezichazwe imiyalelo). Nokho, lo msebenzi ihlobene wezangaphakathi disassembly, inhlangano, futhi ngokuvamile - nokususa ngesivuno. Ngaphezu kwalokho, isidingo ukuxhuma idivayisi izosishayisa on-ebhodini isimiso sikagesi. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uqale, kuyinto efiselekayo ukulinganisa amakhono akho kanye namakhono.
Njengoba singabona, yokupaka izinzwa izimoto - wokwakha inketho ethandwa. Ngo yokuphila kwanamuhla okumatasa, ke isuka esigabeni okunethezeka into oyifunayo, ukuphila kube lula kakhulu.
Yomiselela Isikrini bebodwa - umqondo esiyingozi
Ikhamera Canon G16: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza of the abanikazi. Ikhamera Canon PowerShot G16: incazelo imodeli
Yini okufanele ngiyenze uma ibhethri uthola?
Lan-umhloli: incazelo, isiqu
Ikhamera Digital Sony-Cyber-shot DSC-W810: incazelo sokudubula izindlela, ukubuyekezwa
Vysotsky Monastery e Serpukhov. Serpukhov Vysotsky Monastery Izibuyekezo
Ukuvikelwa ngokomthetho kolwazi.
Abasebenzi amazwana yenkampani kanye namakhasimende - Ltd. "Ekhaya imali"
Ibhandeshi elingenasimo "Solokha"
T-umsizi amaseli, kuyini na? Funda ukuthi kusho ukuthini-helper T cell ephakanyiswe noma sehliselwe
I-Dovzhenko, indlela yokwenza ikhodi yokudakwa ngokweqile: ukusebenza kahle, ukuphikisana nokubuyekezwa. Ukukhokha nge-Dovzhenko
Kanjani ukuba abhekane ngokuphumelelayo nesitha Hangover
Umbango - lokhu okubonakala, umzabalazo. Izibonelo ukusetshenziswa kwegama elithi "ukuphikisana"